गृहमन्त्री ज्यु ! केही त गर्नुहोस – Everest Dainik – News from Nepal
गृहमन्त्री ज्यु ! केही त गर्नुहोस
उर्जा मन्त्रालयबाट देश र जनताको पक्षमा उर्जा भर्न सफल जनार्दन शर्मा बर्तमान मन्त्रीमन्डलमा गृहमन्त्री छ्न । उनको उत्साहपुर्ण आगमनमा धेरैमा सुसासनको आशा जागेको छ । गृहमन्त्रीको हैसियतमा काठमाडौंको सडक सस्कार लाई सभ्य बनाउन सके जनतालाइ ठूलो राहत मिल्ने छ।काठमाडौं को सडक सभ्यताको बारेमा गृहमन्त्रीलाई छोटो जानकारी जुन परिवर्तनको निम्ति महत्त्वपूर्ण बन्न सकोस !
राजधानीमा साझा गुड्ने भएपछि निकै खुशियाली छायो। साझाले जुन रुटमा अनुमति लिन्छ त्यस क्षेत्रका जनताहरु उत्साहित हुने गरेका छन्। मानिसहरुले साझा प्रति ठुलो विश्वास र सद्धभाव राख्ने गरेका छन्। आखिर एउटा बस सञ्चालन हुदा किन उत्साहित भए त जनता ? यसभित्र राजधानीमा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्ने सर्बसाधारणका अनेकौँ कथा–व्याथा लुकेका छन्।
सडक एउटा सभ्यता हो। सडक विकाश र समृद्धिको सुचक हो । सडक आफ‌‌ैँमा क्रियाशिल नभएकोले गर्दा सडक मा सरोकार राख्ने पात्रहरुको व्यवहार र गतिविधिले सडक सभ्यताको लेखाजोखा गर्दछ । जसमा सडकमा गुड्ने सवारी साधनका चालक सहचालक यात्रुले सरोकार बढी हुन्छ। तर, हाम्रो राजधानीमा हामी कस्तो किसिमको सार्वजनिक यातायात सेवा प्राप्त गर्दै छौ ? यसमा अधिकाशंको जवाफबाट सन्तुष्ट हुन सक्दैन् । किनकि काठमाडौंमा सार्वजनिक सवारिमा यात्रा गर्ने हरेकले त्यहाको भद्रगोल र सहचालकको असभ्य वयवहार झेलेकै हुन्छन्।
देशको राजधानीका सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुले सहचालकबाट राम्रो व्यवहार विरलै पाइन्छ । यदी यात्रा गर्दा त्यस्तो सभ्य व्यवहार पाईयो भने त्यो निकै खुशिको कुरा हुन्छ । र त्यो उदाहरण बन्छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि देशको राजधानीका सडकहरुमा मानवियता, आतिथ्यता तथा सभ्यता कती विकराल रुपमा स्खलित भएको छ भनेर । राजधानिमा चल्ने अधिकाशं सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा राजधानीबासी जनताहरुले दुरव्यवहार सहन बाध्य हुनु परेको छ।
सडक सभ्यता कुनै पनि देशको विकासको सुचक मानिन्छ । यसलाई चेतनास्तर र समग्र राष्ट्रको प्रतिविम्वको एउटा दरिलो पाटो मानिन्छ। सडकमा गुड्ने सार्र्वजनिक सवारी सेवामुलक व्यवसायको अनुपम नमुना हुन्छन्। यो नित्तान्तै सेवा व्यवसाय हो। मुनाफा प्राप्त गर्नको लागि यात्रुलाई आतिथ्य र सभ्य व्यवहार प्रदान गर्नु यस क्षेत्रको व्यवसायीक धर्म हो। तर विडम्बना देशको राजधानिमै आम यात्रुहरुले सर्र्वजनिक सवारीका सहचालक बाट असभ्य व्यवहार सहन बाध्य हुनु परेको छ ।
एक त अव्यवस्थित सवारी व्यवस्था त्यसमाथी पनि चालक तथा सहचालकको असहयोगी र पाखण्डी व्यवहारले काठमाण्डौका सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुले आफुलाई अपमानित महसुस नगरेको सायदै छैन होला । घरबाट कार्यक्षेत्रमा निस्कीएपछि आत्मसम्मानमा ठेस पर्ने ठाउँ भनेकै सार्वजनिक यातायात भएका छन्। त्यहाँका चालक तथा सहचालको बोली तथा व्यवहारमा यति रुखो हुन्छ कि यात्रुहरु प्रतिवाद गर्ने आवश्यकता नै ठान्दैनन्। किनकि यस्ता घटना सामान्य मात्रामा हुने भएको भए प्रतिवाद गर्न सम्भव हुन्थ्यो। तर सहचालको रुखो व्यवहार अधिकाशं सवारीमा छ ,राम्रो व्यवहार हुने सवारीसाधन विरलै छन्। त्यसैलेपनि यात्रुहरु प्रतिवाद गर्नुनै बेकार ठान्छन् । अनि काठमाण्डौको सभ्यतानै सायद यहि नै हो कि भनेर निरीह बन्न बाध्य छन्
काठमाडौंका सवारी साधनका सहचालकको व्यवहार देख्दा यस्तो लाग्छ कि सहचालक बन्न चाहिने योग्यता भनेकै धेरै भन्दा धेरै रुखो बोल्न सक्ने, असभ्य बन्न सक्ने , यात्रुलाई दुरव्यवहार गर्न सक्ने हो । किनकि त्यसको प्रमाण सडकमा गुडिरहेका सार्वजनिक यातायातका सहचालकहरुले यात्रुहरुलाई देखाउने तल्लो स्तरको व्यवहारबाट प्रष्ट हुन्छ । उनिहरु यात्रुहरुसंग राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता नै ठान्दैनन्। उनिहरुमा हामी नै सडकका राजा हाँै अनि गाडिमा चढ्ने यात्रु सबै रैती हुन भन्ने भ्रममा परेको हुनुपर्छ सायद। नत्र भने व्यापारमा भगवान रुपी ग्राहकहरुप्रती गर्ने उनिहरुको व्यवहार सभ्य हुन्थ्यो होला।
देशको राजधानी जहाँ आर्थिक सामाजिक ,साँस्कृतिक तथा मानविय चेतना स्तर र व्यवहार अन्य ठाउँको भन्दा विकसित हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। तर जब हामी काठमाण्डौंका सार्वजनिक साधनमा यात्रा गछौँ । त्यही विश्वासमा धक्का लाग्दछ । भन्दा अप्रीय लाग्न सक्छ तर यो तितो यथार्थता हो कि राजधानी प्रती वितृष्णा पैदा हुने एउटा जर्जर पाटो नै सडक सवारीमा देखिने असभ्यता हो । त्यसैले त राजधानिका सडक सभ्य हुन सकेका छैनन्। त्यसैबाट नै सडकमा सभ्यताको प्रतिविम्व झल्कीने होे तर विडम्बना तिनीहरुका बोली र व्यवहार मन चसक्क गर्ने खालका छन् । साहै्र नमिठो लाग्ने छन्।
यायायात क्षेत्र भद्रगोल हुनुमा सरकारी कमजोरी त छँदैछ त्यसतो समयमा राज्य कमजोर छ यसमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट ईमान्दारीता देखाएर राज्यलाई उर्जा प्रदान गर्ने हो । तर, यातायात व्यवसायी यति अराजक छन कि यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले चाल्ने हरेक कदमलाई असहयोग गर्दैछन्। ट्राफिक जरीवाना बढायो भनेर सडक बन्द गर्ने कि राज्यले बनाएको नियम पालना गर्न प्रतिबद्धता जनाउने ? यहीबाट नै प्रष्ट हुन्छ तिनिहरुको दादागिरी र अराजकता ।
आज काठमाडौंको न्युनतम भाडा १३ रुपैया छ । तर त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । सहचालकहरु खुलेयाम १५ उठाउँदैछन्। प्रतिवाद गर्न खोज्यो भने उल्टै कुटाई खान बाध्य छन् यात्रुहरु । विद्यार्थीहरुले पाउने सहुलीयत पुर्णरुपमा पाउन सकेको छैन्। न्युनतम १३ भाडामा ४५ प्रतिसत छुट दिदा ७ रुपैया दिए हुनेमा १० रुपैया तिर्न बाध्य छन् विद्यार्थीहरु। विद्यार्थीहरुको आन्दोलनबाट प्राप्त सहुलीयतको अधिकार लाई भिख दिए जस्तो व्यवहार गर्ने व्यवसायीरुको दिमागमा त्यही सहुलियत दिनको लागि सवारी किन्दा राज्यले छुट दिन्छ भन्ने कुरा छ कि छैन ?
यात्रुहरु चाउचाउका प्याकेट कोचे जस्तो गरी कोच्चीएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । त्यसमाथि सहचालकको रुख व्यवहारले कति पोल्छ होला यात्रुहरुको मन ? कहिले अनुगमन गरेका छन् यी व्यवसायीहरुले हामीले कस्तो सुविधा दिएका छौ भनेर ? दादागिरी देखाएर हुन्छ ? सिन्डीकेटले गर्दा आज यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेर यात्रुलाई राम्रो सुविधा दिन चाहानेहरुले अवसर पाएका छैनन्। पाखुरा देखाएर यो क्षेत्रलाई भद्रगोल पार्दैछन् कथित व्यवसायीहरु ।
पछिल्लो समय ठुलो मानविय क्षति हुने गरी भएका दुर्घटनाको प्रमुख कारण चालकको लापरबाही नै पाईएको छ। तर पनि यातायात व्यवसायी गम्भिर बन्न सकेका छैनन्। आज जनतालाई सुविधा दिने साधनहरु यात्रु मार्ने हतियार जस्तै बनेका छन्। दुर्घटना भवितव्य कुरा हो, यसमा दुईमत छैन् तर चालक कै लापरवाहीले पटक–पटक दुर्घटना हुनु सामान्य कमजोरी होईन्। यसप्रती व्यवसायीहरु गम्भीर बन्नु जरुरी छ।
वर्तमान समय परिवर्तन र विकाशको हो । तर देशको राजधानीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीलाई हेर्दा हामी कति पछाडी छौ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । आज यदि यो देशमा व्याप्त यातायात सिन्डीकेट हट्यो भने यस क्षेत्रमा अरबौँ को लगानि भित्रिने निश्चित छ, यदि सरकारले सिण्डीकेट तोड्ने अाँट गर्‍यो भने । सहचालकको असभ्यताका साथै , जेब्रा क्रस, लेन ,टफिक लाईटको सम्मान नगर्दा राजधानीको सडक अस्तव्यस्त भईरहेको छ ।
एउटा होटलमा १५ रुपैयाँ तिरेर चिया खाँदा त्यहाँ हामीलाई कति राम्रो बोली वचन र व्यवहार हुन्छ? तर एउटा गाडिमा १५ रुपैया तिरेरै यात्रा गर्दा किन रुखो व्यवहार हुन्छ । आखिर यि दुवै व्यवसाय नै हुन । ग्राहकलाई सेवा दिएर नाफा कमाउने ।तर किन यति फरक?
एउटा सीप भएको काठ मिस्त्री र त्यस्तै प्राविधिक सिप भएको चालक ज्ञानको हिसाबले समान हुन भलै क्षेत्र फरक होला । तर किन चालक भन्ने वित्तीकै हाम्रो मनमा फरक धारण बन्छ ? के कहील्यै सोचेका छन् चालक ,सहचालकहरुले ?
यहाँ कसैप्रती आग्रह पुर्वाग्रह साध्न खोजेको होईन्। यातायात क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनको खाँचो छ। हामी राम्रा चालक–सहचालको सम्मान गर्छौँ । तर यस क्षेत्रमा देखाईने पाखण्डीपनाको विरोध गर्नै पर्छ। यसमा यातायात व्यवसायी गम्भीर बन्नु अहिलेको आवश्यकता हो। तर यसो भन्दैमा यातायात क्षेत्रमा भएको भद्रगोलको सम्पुर्ण दोषी नै यातायात व्यवसायी हुन भन्न खोजीएको पनि होईन। मात्र यती होकि उनिहरु आफ्नो उत्तरदायित्व र कतव्यबाट विमुख भएकै हुन्। यातायात व्यवासयाी आफ्नो जिम्मेवारी लाई ईमान्दारीता पुर्वक निर्वाह गरुन् सडकको स्तर उन्नती तथा अन्य पुर्वाधार तथा नितिगत कुरा विकासको लागि सरकारलाई स्वतः दवाव सृजना हुनेछ।
आफु दादागीरी देखाउने, मनपरी तन्त्र लाद्ने, कानुनी राज्यको धज्जी उडाउने अनि सम्पूर्ण दोष सरकारको टाउकोमा थोपर्ने व्यवसायीको कार्य अनैतीक तथा अपाच्य हुनेछ। भक्तपुरमा साझालाई व्यवसायीहरुले अवरोध गरिरहेका छन्। आफुले पनि उत्कृष्ट सुविधा दिएर साझासँग प्रतिस्पर्धा गर्न किन डराईरहेका छन् व्यवासायीहरु? भोली व्यवसायीहरुले साझाले भन्दा उत्कृष्ट सेवा दिन सके भने एक दिन सर्वसाधारण साझा छोडेर उनिहरुकै सवारीमा यात्रा गर्नेछन्। आजको यस विकिसित समयमा हाम्रो सडक सभ्यता उत्कृष्ट हुनु जरुरी छ।
यसमा व्यवसायीले ध्यान दिनै पर्छ। यहाँ केही साझाका बस चल्दैमा अब व्यवसायीहरुको कुनै काम छैन भन्न खोजिएको होईन। साझाका सिमित बसहरुले सबैतिरको माग धान्न पनि सक्ने होईन्। सवाल मात्र यो हो कि यातायात क्षेत्रमा यति ठुलो लगानि गरेर राज्यलाई ठुलो योगदान गरेका व्यवसायीहरुले आफ्नो सेवामा सुधार नगर्दा उनिहरुको योगदानको उचित कदर हुन सकेको छैन्। सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुसँग उनिहरुको भावना पनि यात्रा गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण सवारीका सहचालक र चालकले रुखो र छुद्र बोल्दा उनिहरुको आत्मसम्मान र भावनामा ठेस पुग्ने कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
ट्याग्स: janardan sarma, Narendra Chudali